MORONDAVA : Misokatra ny famotorana ilay mpanamory sambo tratra nitondra sokatra niisa 500
Tsy vao izao no ahitana tranganà fahatratrarana fanondranana sokatra antsokosoko ity teto amintsika saingy mbola misy ihany ireo sahy minia manao izany. 11 janvier 2018
Araka ny loharanom-baovao voaray avy ao an-tampon-tanànan’i Morondava omaly àry dia ny talata 9 janoary lasa teo indray no tratra tao an-toerana ilay sambo fantatra fa nitondra sokatra marobe. Voalaza fa avy any Maintirano izy io no nandalo teo Morondava ka hiverina hihazo an’i Mahajanga.
Tsy nahomby ny teti-dratsy saika hanao fanondranana ka izao sarona izao. Rehefa nisaina ireo biby ireo dia nahatratra teo amin’ny 500 teo ka ny 292 tamin’ireo sisa no velona. Ny ambiny rehetra kosa dia tapitra maty avokoa noho ny famatorana azy ireo tao anaty gony sy nifanaingitaingina. Avy hatrany dia nogiazan’ny Polisy ireto biby arovana ka voasambotra ihany koa ny mpanamory ilay sambo.
Efa mandeha ankehitriny ny famotorana ny raharaha ka tadiavina ireo ati-doha nikotrika sy ireo tambajotra ambadik’ity fanondranana harem-pirenena ity. Mbola tsy misy aloha hatreto ireo olona ahiahiana fa andrasana ny fivoaran’ny fanadihadiana hatreto.